DLULA Klagenfurt Airport LOWK Austria FSX & P3D - Rikoooo
I-Klagenfurt Airport LOWK Austria FSX & P3D Inguqulo 5
Usayizi 110 MB
Play 8 742
Umbhali: Manfred Marbler
Nasi nezindawo ezinhle futhi ephelele Klagenfurt sezindiza e-Austria ngo-uManfred Marbler, indawo v5 zihlanganisa photo-real yokwenza, ebusuku yokwenza, indlela yokwenza ezithile zonyaka, 3D izakhiwo eziningi, evulekile eminingi futhi sezindiza. Engeza-on high for Freeware.
Klagenfurt Airport (ICAO: LOWK), owaziwa nangokuthi Kaernten Airport, yilona sezindiza Klagenfurt, umuzi lesithupha ngobukhulu e-Austria. It is eseduze enkabeni yedolobha Klagenfurt futhi ukhonza abanye izindiza ezokungcebeleka European futhi izindawo wedolobha elikhulu. Klagenfurt Airport siqukethe eyodwa nomgibeli encane isakhiwo ukuphela okuyinto izici kwezinye izitolo nezindawo zokudlela kanye izivakashi ithala.
Iphinifa inikeza zezitsha eziningana ezindiza kwaphakathi nendawo efana Airbus A320 kanye ezincane jikelele zezindiza izindiza. Njengoba azikho amabhuloho jet, sikhwela ibhesi asetshenziselwa-boarding.
Isikhumulo sezindiza i-Fort Wayne Intl P3D 1.1
Ushuaia Malvinas Argentinas Intl Isikhumulo sezindiza FSX & P3D
Isikhumulo Sezindiza Eside FSX & P3D 5.0
Izindiza Izindiza Izindiza I-Hamilton YHML FSX 1.01
Isikhumulo sezindiza iRichmond Intl FSX & P3D